Qarax aad u weyn ayaa laga maqlay meel u dhow guriga RW hore ee Lubnaan Saad Al-Hariri.. – Hagaag.com
Qarax aad u weyn ayaa laga maqlay meel u dhow guriga RW hore ee Lubnaan Saad Al-Hariri..
Posted on 4 Agoosto 2020 by Admin in World // 0 Comments
Qarax weyn ayaa laga maqlay meel u dhow guriga Rai’ isul wasaarihii hore ee Lubnaan Saad Al-Hariri ee ku yaal bartamaha caasimada Beirut, ka hor inta aan la soo saarin xukun maxkamadeed la xiriira dilka aabihiis.
Warbaahinta Lubnaan ayaa sheegtay in macluumaadka horudhaca ahi ay muujinayaan in qaraxa uu ka dhashay walxaha qarxa gudaha bakhaar ku yaal dekedda Beirut, isla markaana waxyeelo u gaystey aagga ku hareereysan.
Wakaaladda wararka Anatolia ayaa soo werisay in “qarax aad u weyn uu ka dhacay meel u dhow guriga Rai’ isul wasaarihii hore ee Lubnaan ee ku yaal bartamaha magaalada Beirut”, waxay intaasi ku dartay in qaraxu uu khasaare weyn gaarsiiyay xarunta dowladda.
Wakaaladda Wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay in qarax aad u weyn uu ka dhacay Beirut “waxaa laga maqlay daryanka ama dhawaaqa qaraxa magaalada oo dhan.”
Waxay intaas ku dartay inaysan garaneyn sababta rasmiga ah ee qaraxan iyo halka lala beegsaday, laakiin xafiiska wakaaladda ee ku yaal magaalada Beirut ayaa gilgiley qaraxa, qiiq culusna lagu arkay cirka caasimadda.